अचम्मको झरना, जहाँ बषौदेखि आगो बलिरहेको छ ॐ लेखेर एक शेयर गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ ! – च्यालेन्ज नेपाल
अचम्मको झरना, जहाँ बषौदेखि आगो बलिरहेको छ ॐ लेखेर एक शेयर गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ !
एउटा रहस्यमय ढुङ्गाको माथिबाट लगातार झरना बगिरहन्छ तैपनि झरनाको ठिक तल कयौँ वर्षदेखि आगो बलिरहेको छ ।यो झरना न्युयोर्कको चेस्टनट रिज काउन्टी पार्कमा पर्छ। जसलाई आजभोलि एटरनल फ्लेम भनिन्छ । यो झरनाको विशेषता भनेको यहाँ वर्ष भरि पानी बगिरहन्छ र यसको ठ्याक्कै तल आगो बलिरहन्छ ।
यो आगोको बारेमा भारतको एउटा विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले एक अनुसन्धान पनि गरेको छ ।खोजपछि वैज्ञानिकहरुले ढुङ्गाको भित्रिबाट मिथेन ग्यास निस्कने दावी गरेका छन् । सोही कारण आगो निरन्तर बलेको हुनुपर्छ।
स्रोत :- पुर्बेली मेडिया
Tags: Challenge nepal challenge online tv Gopal pakhrin अचम्मको झरना आजको खबर आजको दिन च्यालेन्ज अन्लाइन टिभी च्यालेन्ज नेपाल जहाँ बषौदेखि आगो बलिरहेको छ ताजा अपडेट ताजा खबर ॐ लेखेर एक शेयर गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ !
Previous म एक २७ बर्षिया महिला मेरो श्रीमानको सम्पर्क शक्ति कम छ, के गर्ने होला ?
Next अचम्मको फल भेटियो हेर्नुहोस भिडियो सहित